Kastam ka kooban todobo xafiis, lagu qaadi doono canshuuraha dawladda oo laga hirgaliyey koontaroolka Halabookhad, Galkacyo. – Radio Daljir
Kastam ka kooban todobo xafiis, lagu qaadi doono canshuuraha dawladda oo laga hirgaliyey koontaroolka Halabookhad, Galkacyo.
Galkacyo, Aug 06 – Waxaa maanta xarigga laga jaray dhisme cusub oo laga hirgaliyey koontaroolka waqooyi ee magaalada Galkacyo kaasoo loogu talo-galay in uu noqdo Kastamka canshuuraha dawladda ee bartaasi koontarool ka soo xarooda.
Dhismahaan oo ka kooban todobo-qol ayaa loogu talo-galay in laga dhigo xafiisyada waaxaha canshuuraha ee dawladda gaar ahaanna hay’adihii horay koontaroolka dhaqaaluhu uga soo gali jiray oo aan goobtaasi horay ugu lahayn wax xafiisyo ah oo ay dakhliga soo gala ku maamulaan.
Kastamkaan cusub ee maanta la furay, waxaa sidoo kale xafiisyo ku yeelan-doona laanta illaalinta nabad-galayada waddoonka kuwaasi oo halkoodana kula socon-doona gaadiidka aan canshuurnayn iyo kuwa aan wadan lambar la isku aqoonsado ee taargada loo yaqaano.
Kasow xafiiska koontaroolka laga hirgaliyey, waxaa iyana jirta barxad-weyn oo lagu talo galay in lagu baaro gaadiidka xamuulka ah ee soo galaya magaalada amaba ka baxaya, halkaasi oo laga sameeyey baakinno waaweyn oo ay baabuurtu ku kala weecan-doonaan.
Xafladda xaruntaan cusub xarigga looga jarayey waxaa ka qayb-galay mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Mudug oo uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka Mudug ahna duqa magaalada Galkacyo Maxamuud Cabdiraxmaan Cuuke, oo isagu laf-ahaantiisu daah-furay xarunta, kana jaray xarigga cusubka muujiya.
Guddoomiyuhu hadal uu jeediyey markii dhismahaasi la furay ayuu ku tilmaamay tallaabadaani in ay ka mid tahay horu-kac wax-qabad ee maamulkiisu uu ku tallaabsaday muddadii saddexda bilood ahayd ee uu jiray.
Dhinaca kale guddoomiyuhu, waxaa uu soo hadal qaatay tallaabooyin kale oo ay qaadeen kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen dayactir xooggan oo lagu sameeyey dhammaanba xarumaha ciidanka bilayska ee magaalada Galkacyo sida qaybta bilayska, saldhigga dhexe, saldhigga warshad Galley iyo sidoo kale saldhigga Miir, goobahaasi oo rinjiyan, albaabo iyo daaqado baddalid lagu sameeyey.